Umyalezo weLifu udibanisa uMyalezo oThunyelweyo kwiiVenkile zeSelfowuni | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 18, 2015 Douglas Karr
SmartFocus ibhengezwe kwi YeHlabathi yeNational Congress Namhlanje izakube inikezela ngeebhakana zokuqala ehlabathini. Ii-beacons ezibonakalayo zivumela ukuthengisa okusekwe kufutshane ngaphandle kobunzima be-Hardware okanye ukugcinwa. Iinkampani zinokubangela umyalezo omncinci wendawo ukwenza amava omxholo usebenzisa isicwangciso somgangatho.
ISmartFocus's Ilifu lomyalezo Itekhnoloji inika abathengisi bophawu uluvo olupheleleyo lwabathengi babo, bebenza ukuba babenakho ukuhambisa ngakumbi ukuthengisa ngentengiso yomntu kubandakanya nokunikezelwa komxholo, iintlawulo, ukuthembeka kunye nokuphononongwa.
Wonke umthengi kuhambo lwakhe olwahlukileyo. Inkuthazo yokuzama, ukuthenga, okanye ukuhlala ngokunyaniseka kutshintsho ngokuxhomekeke kukhetho lomntu ngamnye. Iselfowuni inegunya lokufikelela ku-24/7 'kulawulo olukude' lobomi bomthengi wakho kunye nokwenza ukuba imiyalezo yokuthengisa eyenziwe ngokwakho ibhekiswe bhetele kunayo nayiphi na enye into. URob Mullen, u-CEO kwi-SmartFocus
Ilifu loMyalezo Iqhubekekisa idatha enkulu yokwenza ukuba ibenakho ngokuzenzekelayo kwaye inxibelelanise imeko yonxibelelwano kubo bonke abathengi. Usebenzisa izinto ezininzi kubandakanya indawo, imozulu, ubudala babathengi kunye nesini, iimveliso ozithandayo kunye neemveliso, imbali yokukhangela kwiwebhu, indlela yokuziphatha yokuthenga kwangaphambili kunye neenqwelo ezilahliweyo, Ilifu loMyalezo limamela kwaye lifunde kubathengi.
Umthengisi omkhulu wase-UK, uMonwabisi, Usebenzisa i-SmartFocus's Cloud Cloud.
I-SmartFocus inceda ukwenza amava ethu abaxumi abe ngawona angcono, nokuba yeyiphi na itshaneli esiyisebenzisayo, kunye ne-SmartFocus Message Cloud iqinisekisa ukuba iqela lam kunye nam sinokunikezela ngamava omsebenzisi ogqibeleleyo ngalo lonke ixesha. Ukuphindaphinda amava ethu asesitolo xa ngamnye wabathengi bethu etyelela iwebhusayithi yethu okanye efumana omnye wemiyalezo yethu yentengiso kubalulekile kuthi. Isisombululo se-SmartFocus sasinika zonke izakhono esizifunayo kwiqonga elinye, elibanzi. UPhil Geary, iGosa eliyiNtloko leNtengiso loMonwabisi
SmartFocus ngumvelisi kumyalezo kunye nonxibelelwano, wenza ezona zixhobo zikhulu zehlabathi- kubandakanya iNestlé, iMercedes-Benz, iMacy kunye neLevi kunye nokuqonda nokunxibelelana ngokusondeleyo kubathengi banamhlanje abaxhumeneyo; ingaba ngewebhu, iselfowuni, i-imeyile okanye amajelo entlalontle. Isisombululo seLizwi leMiyalezo, iSmartFocus iyaphulaphula kwaye ifunde kubathengi isebenzisa ii-algorithms ezinelungelo elilodwa lomenzi kunye nezixhobo zokuthengisa ezisekwe kwindawo. Sebenzisa Umyalezo weLifu, abathengi beSmartFocus banedatha etyebileyo, ubukrelekrele kunye nezixhobo zokuzibandakanya ngokukodwa kwimeko ethile, ngalo naliphi na ijelo ledijithali.
tags: ubheduukuthengisa kwimekoInkongolo yehlabathi ehambayoukuthengisa kufutshaneIvenkileilumkeilifu lomyalezo
Izibonelelo ezili-10 Wonke amaShishini amaNcinci aqonda ngesiCwangciso seNtengiso seDijithali